Buy Anti-Slip Handle Ceramic Paring & Fruits Kitchen Knives - Free Shipping & No Tax | WoopShop®
$5.99 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $7.99
အရောင် ပြာသော စိမ်းလန်းသော ပန်းရောင်
ပြာသော စိမ်းလန်းသော ပန်းရောင်
Slip Anti-Slip လက်ကိုင်ကြွေထည်နှင့်သစ်သီးများမီးဖိုချောင်သုံးဓါး - အပြာရောင် backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
လက်မှတ်: SGS, FDA က,LFGB,CIQ,အီး / ဥရောပသမဂ္ဂ,EEC
ဓါးအမျိုးအစား: Paring ဓါး
Size: 18.5 * 4.5cm
ပစ္စည်း: PP + ကြွေထည်
I'm really happy with the store communication. Since the beginning they were really kind and they helped along all the process.
mały zgrabny, dobrze leży w dłoni powinien sięsprawdzić w kuchni
ကျွန်ုပ်ပိုင်ဆိုင်ဖူးသမျှအရသာဆုံးနှင့်ဈေးအပေါဆုံးကြွေထည်ဓားဖြင့်စာတိုအားဖြင့်အလွန်ဖော်ရွေသောဆိုင်ဖြစ်သည်။ ငါအရမ်းအကြံပြုလိုတယ် ဒါကြောင့်တကယ်ချွန်ထက်သကဲ့သို့သတိထားပါ!